Wararka Maanta: Talaado, May 15, 2012-Ciidamada Midowga Yurub oo Weerar ku qaaday saldhig ay Kooxaha burcadbadeedu ku lahaayeen Barriga Soomaaliya
Talaado, May 15, 2012 (HOL) — Ciidamada Midowga Yurub ee ku sugan xeebaha dalka Soomaaliya oo isticmaalaya diyaaradaha qummaatiga u kaca ee Helicopter-ka loo yaqaan ayaa aroornimadii hore ee saakay weeraray saldhig ay burcadbadeeddu ku lahaayeen meel ku dhow degmada Xarardheere ee gobolka Mudug.
Howgalkan oo ay ka qaybqaateen maraakiibta dagaalka ee Midowga Yurub ayaa waxaa lagu burburiyay doomo ay isticmaalayeen kooxaha burcadbadeedda ah iyo sahay saldhiggaas u taallay, iyadoo howgalkan uu noqonayo kii ugu horreeyay oo barriga laga fuliyo.
Weerarkan ayaan la sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay, waxaana saraakiisha Midowga Yurub ee hoggaaminayay howgalka ay sheegeen in howgalkan uu ahaa mid ay ogolaasho uga haystaan dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Goobjoogayaal ku sugan deegaanka uu weerarkan ka dhacay ayaa sheegay in doomaha ay burburiyeen ciidamada badda Yurub ay ku jireen kuwo ay dadka deegaanku ku kalluumeystaan, iyagoo xusay inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay.
Mid ka mid ah burcadbadeeddii saldhiggaas ku sugnaa ayaa sheegay inay isaga carareen goobtii la weerary kaddib markii diyaaraduhu ay dhowr jeer ku wareegeen saldhigga, wuxuuna xusay inuusan ogeyn khasaare nafeed ah oo ka dhashay weerarka.
Burcadbadeedda Soomaalida ayaa la sheegay inay afduub ku haystaan 17-markab iyo 300 shaqaale oo la socda maraakiibtaas.
Weerarkan badda ah ee ay fuliyeen ciidamada Midowga Yurub ee la dagaalamaya burcadbadeedda ayaa lagu sheegay inuu yahay mid looga hortagayo in burcadbadeeddu aysan ka helin dhulka iyo meel ay ku nastaan, taasoo ay saadaalinayaan hoggaamiyeyaasha howgalkan inuu yahay midka looga guuleysan karo burcadabdeedda.
Haweenyda afhayeenka u ah howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda ee ku sugan xeebaha Soomaaliya, Jacqueline Sherrif ayaa sheegtay in howlgalkan uu sii socon doono inta laga cirib-tirayo burcadbadeedda.